သင့်ရဲ့ News Feed တွေကို Up ကိုရှင်းလင်း Facebook ပေါ်မှာသူငယ်ချင်းများ Hide
လူမှုမီဒီယာ Facebook က
သင်တို့ကဲ့သို့မပြုကြနှင့်စာတိုက်ကိုမြင်လျှင်ရှောင်ကြဉ်ပါရန် Facebook ပေါ်မှာသူငယ်ချင်းများ Hide
by Leslie က Walker
04 ၏ 01
နှင့်သင့်ရဲ့ Facebook ဘဝ - သင်၏ News Feed တွေကို Up ကိုရှင်းလင်း Facebook ပေါ်မှာသူငယ်ချင်းများ Hide
tools တွေ subscribe သုံးပြီး Facebook မှာ menu ပေါ်တွင်မိတ်ဆွေများက Hide ။ © Facebook က
ဒါကြောင့်သင်ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့မတှေ့ဘူးကလူထံမှရ status ကိုမွမ်းမံမှုများ၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Facebook ပေါ်တွင်မိတ်ဆွေများကပုန်းအောင်းသင်ယူရကျိုးနပ်မယ့်ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
သင်, သင်တန်း၏, ရိုးရှင်းစွာအဘယ်သူ၏ status ကို updates များကိုသင်ငြီးငွေ့စရာသို့မဟုတ်နှောင့်အယှက်ကိုရှာဖွေမည်သူမဆို unfriend နိုင်ဘူး။ ဒါကသူတို့ရဲ့မလိုချင်တဲ့ status ကို updates များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းတစ်သေချာ-မီးလမ်းပါပဲ။
မကြာခဏသျောတကယ့်ကိုသူတို့ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့သတင်းကိုအစာကျွေးခြင်းအတွက်တက်မပြပါဘူးရေးဖို့အဘယျသို့ပုန်းအောင်း, ဆိုလိုတာက Facebook ပေါ်တွင်မိတ်ဆွေများကဖုံးကွယ်ဖို့ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါကလမ်း, သင်သည်ထိုသူတို့ offending အန္တာရာယ်သို့မဟုတ်လုံးဝရပ်ဆိုင်းခြင်းများရန်မလိုပါ။ သူတို့ဟာနေဆဲသငျသညျအစဉျအမွဲသူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါချင်ပါဘူးအမှု၌, သင့်မိတ်ဆွေတစ်စာရင်းတွင်ရှိလိမ့်မည် - ဒါမှမဟုတ်သူတို့သင်တစ်ဦးအမြန် Message ပေးပို့ချင်တယ်။
Facebook မှာမဟုတ်တော့င်း၏အမှန်တကယ် menu ကိုဘာသာစကားမှာ "ဝှက်" ကိုအသုံးပြုသည်, ဒါပေမယ့်သင်ဆဲသူငယ်ချင်းများကို "ဖုံးကွယ်" နိုငျသညျ။ ဒါဟာ menu ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုကြီးတွေ, 2011 Facebook ကဒီဇိုင်းအသစ်ပြီးနောက် relabeled တယ်ရုံပါပဲ။ ဒါ့အပြင် "ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမိတ်ဆွေများက" မျိုးစုံအဓိပ္ပါယ်များရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကပုန်းရှောင်၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသို့မဟုတ်သင့်သူငယ်ချင်းများ၏ status updates များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းတဦးတည်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းသော်လည်း "ပိတ်ပင်တားဆီးမှု" "ဝှက်" နဲ့မပေးသုံးပါလိမ့်မယ်။
အချိန်-saving Facebook က-တိုးမြှင့်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် Facebook ကသူငယ်ချင်းများကိုပုန်းအောင်း၏စဉ်းစားပါ။
သင်မည်သို့တစ်ဦးက Facebook မိတ်ဆွေ Hide သလား?
ထိုသို့ပြုမှမျိုးစုံနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာ, သင်သည်သင်၏သတင်း feed ကိုမှတဆင့် scroll နှင့်အထူးသဖြင့်လူတစ်ဦးကစေလွှတ်ပစ္စည်းပစ္စယသင့်ရဲ့ feed ကိုများတွင်ပြသရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမကြာခဏတည်းဖြတ်ရန်တစ်ဦးချင်းအဆင့်အတန်း updates များကိုပေါ် click လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအထကျပုံတွင်ပြ drop-down menu ကိုအသုံးပြုပါ။
သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးပင်အသေးစိတ် menu ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာတစ်ခုချင်းစီကိုမိတျဆှေရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုစာမျက်နှာ, သွားအားဖြင့်အတူတူပါပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သို့မဟုတ်သင်မိတ်ဆွေများကိုစာရင်းဖန်တီးတပြင်လုံးကိုစာရင်းများအတွက် setting ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်ရုံ, စာရင်းအသစ်တစ်ခုဖန်တီးသင်ချင်တယ်ဆိုနာမကိုအမှီအပ်သဖြင့်, အဘယ်သူ၏ updates များကိုသင်အများကြီးမဟုတ်အကျိုးစီးပွားပြုပါကလူတွေကို add, ထို့နောက် settings.Facebook သင်သည် handily ဤရည်ရွယ်ချက်အစေခံနိုငျသောကွက်လပ် "အသိ" စာရင်းပေးသည်စာရင်းပြောင်းပေးပါ။
အိုကေ, သောခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ (သင်နေတုန်းပဲ Facebook ကို၏အခြေခံအကြောင်းနည်းနည်းရှုပ်ထွေးနေပါက, ပေါ်မှာဤလမ်းညွှန် သည့် Facebook ကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လို သတင်းစာကျွေးခြင်းနှင့်မြို့ရိုးအကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ) အခုတော့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၏အသေးစိတ်လေ့လာသင်ယူကြကုန်အံ့။
04 ၏ 02
သင့်ရဲ့ News Feed တွေကိုတဆင့်လှိမ့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် Facebook ပေါ်တွင်သူငယ်ချင်းများ Hide လုပ်နည်း
သူတို့ကို unfriending မပါဘဲ - ဤသင်သည်သူတို့၏ updates များကိုမှ Facebook ကသူငယ်ချင်းများကိုသို့မဟုတ် "မှာယူမှုဖျက်" "ဖုံးကွယ်" ကိုခွင့်ပြုမီနူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Facebook က© 2011 ခုနှစ်အဓိကဒီဇိုင်းအသစ်တယ်
Facebook ပေါ်တွင်မိတ်ဆွေများကဖုံးကွယ်ထားရန်တစ်ခုမှာကောင်းသောလမ်းသည်သင်၏သတင်း feed ကိုဖြတ်သန်းသွားနှင့်ရွေးချယ်သည့် Facebook ကို "စာရင်းဖျက်ရန်" button ကိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာသင်၏အစာကျွေးခြင်းမှတဆင့် culling စတင်သူ၏ updates များကိုသင်ပုန်းရှောင်ချင်သူတစ်ဦးဦးကိုရှာပါ။ ထိုအခါ၎င်းတို့၏အဆင့်အတန်းကို update ကို၏ညာဘက်အစွန်ဆုံးဖို့ကဆင်းနည်းနည်းမြှားကို click လုပ်ပါ။ သငျသညျအထကျပြပုံရိပ်နှင့်တူ drop-down menu ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
မီနူးနည်းနည်းရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ထိပ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသင်အထူးသဖြင့် update ကိုဖုံးကွယ်သို့မဟုတ် spam များကိုကြောင့်အစီရင်ခံရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လိုချင်တာတွေမဟုတ်ပါဘူး။
သငျသညျအာရုံစူးစိုက်ရာအရပ်နူးကိုအလယ်နှင့်အောက်ခြေအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အလယ်မှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသင်လူတစ်ဦးအနေဖြင့်မြင်သောနောက်ဆုံးသတင်းများ၏အသံအတိုးအကျယ်သို့မဟုတ်အရေအတွက်ထိန်းချုပ်သည်။ အောက်ခြေ "စာရင်းဖျက်ရန်" ရွေးချယ်စရာသင်သည်သူတို့၏အဆင့်အတန်း updates များကိုများ၏အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အဆင့်အတန်းနှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်လှုပ်ရှားမှု updates များကိုအပေါငျးတို့သဖုံးကွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖုံးကွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
Menu ကို၏အလယျပိုငျးအပိုင်း: အ Volume ကိုထိန်းချုပ်ရေး
volume အတှကျသင်ဤပုဂ္ဂိုလ်ထံမှမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်အုပ်ချုပ် drop-down menu မှာသုံးအဓိကရွေးချယ်မှုရှိသည်။ သူတို့သည်သင်၏မိတ်ဆွေတစ်နေနှင့်သင်သည်ထိုသူတို့ထံ၌စာရင်းသွင်းနေလျှင်အဆိုပါရွေးချယ်မှုသင်နှင့်အတူတင်ပြပါလိမ့်မယ်:
အများစုမှာ updates များကို
ဒါကြောင့်သူတို့ကသင့်ရဲ့သတင်းကိုအစာကျွေးခြင်းအတွက်ရေးဖို့အဘယ်အရာကိုအများစုမြင်ချင်ကြောင်းယူဆသောကြောင့်, default အနေဖြင့်, Facebook, သင်၏မိတ်ဆွေများအတွက် "အများဆုံး updates များကို" ဖို့စာရင်းသွင်း button ကိုသတ်မှတ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ထိုလူတစ်ဦးကနေလက်ခံရရှိချင် updates များကိုများ၏အသံအတိုးအကျယ်ပေါ်တွင်အလတ်စား option ကိုပါပဲ။
ဒါပေမယ့်သင်အလွယ်တကူသင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းမဆိုသို့မဟုတ်အားလုံးကိုထံမှသာ "အရေးအပါဆုံး" updates များကိုသင့်ရဲ့ news feed ထဲမှာပေါ်လာရှိသည်ဖို့ပြန် dial နိုင်ပါတယ်။ "အရေးကြီးဆုံးကတော့" သင်ကတခြားမိတ်ဆွေတွေဆီကတုံ့ပြန်မှုတွေအများကြီးရတဲ့နေကြသည်သောသူတို့သည်ပေးပို့သာ updates များကိုကြည့်ရှုမည်ဟုဆိုလိုပေသည်။ ဒါမှမဟုတ်သင်ကသူတို့ကိုကနေ "လူအပေါင်းတို့သည် updates များကို" မြင်ချင်ဟုအားဖြင့်သင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများအဘို့အ up ပြုလုပ် dial နိုင်ဘူး။
သင်လုပ်ချင်တဲ့ option ကိုဖွင့် click ပါ။
Menu ကိုဒုတိယအပိုင်း: စာရင်းသွင်းထားခြင်းမှဖြုတ် Options ကို
drop-down menu ကို၏အောက်ဆုံးမှာရွေးချယ်စရာက Facebook ပေါ်တွင်ယူမှုဖျက် feature ကိုအုပ်ချုပ်။
သင်သတင်း feed ကို OR သင့်ရဲ့ ticker မှာသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှု updates များကိုမဆို၎င်းတို့၏အဆင့်အတန်းကို updates များကိုမဆိုကြည့်ရှုမည်မဟုတ်, ဆိုလိုတာကလုံးဝလူတစ်ဦးကနေနှုတ်ထွက်နိုင်ပါတယ်။ ထို option သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနာမကိုအမှီအစားထိုးအတူ "SoandSo ထံမှစာရင်းဖြုတ်" အမည်တပ်ထားသောဖြစ်ပါတယ် "Soandso ။ "
Activity ကို updates များကိုသင်၏မိတ်ဆွေများ Facebook ပေါ်မှာယူလုပ်ရပ်များဖြစ်၏ သူတို့က, သင့်ရဲ့ ticker ၌သင်တို့၏ Facebook စာမျက်နှာ၏ညာဘက်အခြမ်းအပေါ်တစ်ဦးအလွန်သေးငယ်သော window တွင် scrolls ကြောင်း Real-time အင်ဖို၏ sidebar မှာပေါ်လာ။
အဆင့်အတန်းသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှု - ဒါကြောင့် Facebook ကသင်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး update ကိုပုံစံများမှနှုတ်ထွက်ချင်ရှိမရှိ၏ဒီမှာရွေးချယ်မှုပေးသည်။
သင်သည်သင်၏အဓိက news feed ထဲမှာကိုယ်အဆွေခင်ပွန်းထံမှမည်သည့် status ကို updates များကိုမလိုချင်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကသင်၏ ticker တွင်ထည့်သွင်းချင်ကြဘူးလျှင်, သင်ပြောနေပစ္စည်းကိုကလစ်နှိပ်ပါချင်ပါတယ် "SoandSo ကနေ status ကိုမွမ်းမံမှုများကနေနှုတ်ထွက်။ "
တနည်းအားဖြင့်သင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှု updates များကိုတွေ့မြင်ချင်ကြပါဘူးလို့ပြောနိုင်ကြောင်း "SoandSo နေဖြင့်လှုပ်ရှားမှုပုံပြင်များမှယူမှုကိုဖျက်။ "
နှစ်ဦးစလုံးဖုံးကွယ်ဖို့, "SoandSo မှနှုတ်ထွက်။ " ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
ထိုစာရင်းမှပယ်ဖျက် options များ၏ဤ menu ကိုများစွာသောလူနှင့်မျှမတို့သည်အံ့ဩ confuses ။ စည်းကမ်းချက်များနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာအပြင်အဘို့ site ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်နည်းနည်းအကူအညီနဲ့ရှိပါသည်။ ရှုပ်ထွေးမှုများသာပိုဆိုးလာ (နှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်) နှစ်ခုမူလတန်းယူမှုဖျက်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုလုံး pulldown Menu ထဲမှာလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်မပြကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုပါပဲ။
သင်ဥပမာအားဖြင့်, သင့်ရဲ့ news feed ထဲမှာတည်းဖြတ်နေတဲ့ status ကို update ကိုဖွင့်လျှင်, များသောအားဖြင့်ရှိုး "status ကိုမွမ်းမံမှုများမှနှုတ်ထွက်" ။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးလှုပ်ရှားမှု update ကိုဖွင့်လျှင်, ထို option - "လှုပ်ရှားမှုပုံပြင်များမှနှုတ်ထွက်" - ပေးအပ်သည်။
အဆိုပါ updates များကိုနှစ်ခုစလုံးအမျိုးအစားများကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့ "Soandso မှနှုတ်ထွက်", ထိုအချိန်အများစုကိုပုံပေါ်ပါတယ်။
စာရင်းဖျက်ရန် Unfriend မဆိုလိုပါသလား
သင်၏အဆွေခင်ပွန်းထံမှနှုတ်ထွက်ဖို့သျောစိတျထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါသင်သည် defriending သို့မဟုတ်သူတို့ကို unfriending နေကြသည်ဟုမဆိုလိုပါ, ကပဲသင့်ရဲ့ news feed မှာသူတို့ရဲ့ status ကို updates များကိုကြည့်ရှုမည်မဟုတ်ဆိုလိုသည်။
04 ၏ 03
သူတို့ရဲ့ Timeline ကိုသို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးဖိုင်စာမျက်နှာကနေသင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းများ Hide
ဒီ menu ကိုဝင်ရောက်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦး၏ Facebook က Timeline ကိုစာမျက်နှာပေါ်တွင် "သူငယ်ချင်းများ" ကိုနှိပ်ပါ။ © Facebook က
မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့ profile စာမျက်နှာသို့တိုက်ရိုက် Going သင်သည်သင်၏သတင်းစာကျွေးခြင်းနှင့် ticker အတွက်တွေ့မြင်ချင်ပါတယ်သူတို့ထံမှပစ္စည်းပမာဏကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နောက်ထပ်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ profile ကိုစာမျက်နှာသို့မဟုတ်အချိန်ဇယားတွင်, ထိန်းချုပ်မှုသင့်ရဲ့ menu ကိုသက်ဝင်စေဖို့ထိပ်မှာ "Friends" button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သငျသညျအထကျပြတတူသော drop-down menu ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ news feed ထဲမှာကိုယ်အဆွေခင်ပွန်းရဲ့ပို့စ်များကိုတစ်ဦးအနားမှာမြှားကို click ကျသောအခါသင်တို့ကိုတွေ့မြင်အတူတူရွေးချယ်စရာအချို့စာရင်းပြုလုပ်ထားသည်။
အထက်ပုံမှာသင် Timeline ကို / ကိုယ်ရေးဖိုင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်မိတ်ဆွေများ button ကိုနှိပ်လျှင်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်သောမိတျဆှမြေား-တည်းဖြတ်ရေး menu ရဲ့ version ကိုပြသသည်။
News Feed တွေကို Option ကိုအတွက်ပြရန်
အောက်ခြေအနီးတစ်ဦးက key ကို option ကို "သတင်း Feed တွင်ပြရန်" ဟုခေါ်သည်။ ဒါဟာသင်နောက်ဆုံးသတင်းများသင့်ရဲ့အဓိကသတင်း feed ကိုများတွင်ဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှတစုံတခုကိုလိုခငျြရှိမရှိဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ setting ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်က Check သို့မဟုတ် uncheck လုပ်ပါ။
မီနူးရဲ့ထိပ်မှာသင်သည်ထိုသူတို့အသီးအသီးကနေမြင်သောအရာကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နောက်ထပ်အင်အားကြီးလမ်းသောသင်၏အဆွေခင်ပွန်းစာရင်းများ, ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျကနေမိတ်ဆွေတစ်ဦး add သို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ဖို့စာရင်းတစ်ခု name ကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ (ကဖန်တီးစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ဤဆောင်းပါးကို Read Facebook ကသူငယ်ချင်းများကိုစာရင်း ။ ထိုအသင်, သေးသောအသစ်ရဲ့ privacy settings တွေကိုချိန်ညှိဖို့ဘယ်လိုပေါ်ဤအကြောင်းရှင်းပြမဖတ်လျှင် Facebook ကိုပုဂ္ဂလိကလုပ်များနှင့် ပိုမိုလုံခြုံ။ ။ )
ပိုကြည့်ရှုပါရန် "Settings" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
Facebook ကအစသင်သင့်သူငယ်ချင်းများထံမှမြင်ချင် updates များကိုများ၏အတိအကျအဘယ်အရာကိုမျိုးကိုကိုကျော်ကအများကြီးပိုပြီး granular ထိန်းချုပ်မှုကိုပေးသည်။ လာမယ့်စာမျက်နှာတွင်ရွေးချယ်စရာအပေါငျးတို့သတွေ့မြင်, (အထက်ပုံတွင်ပြထားတဲ့အတိုင်း။ ) drop-down menu ကထဲမှာရှိ "Settings" ခလုတ်ကိုကလစ်ရန်, ငါတို့သည်ဤအပို setting များကိုမည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
04 ၏ 04
သူငယ်ချင်းများဖျောက်ထားခြင်းအခါ, သင်က Hide မှဘယ်လှုပ်ရှားမှုများရှေးခယျြနိုငျ
ဤသည် menu ကိုသငျသညျအသီးအသီးမိတျဆှေအနေဖြင့်မြင်ချင်အကြောင်းအရာအဘယ်အရာကို type ကိုထိန်းချုပ်သည်။ Facebook က Facebook ကို© 2011 ခုနှစ်လုံးဝကြောင့်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်
Hide မှဘယ်လှုပ်ရှားမှုများ Choose: အဘယ်အရာအမျိုးအစား?
သငျသညျမညျသူမဆိုရဲ့ Timeline ကိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်မိတ်ဆွေများ button ကိုအောက်မှာ drop-down menu မှာ "Settings" ကိုကလစ်နှိပ်ပါလျှင်, သင်အသစ်တစ်ခုကို drop-down menu ထဲမှာနောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ အထက်ပုံမှာသငျသညျကိုကလစ်နှိပ်ပါပြီးနောက်သင်မြင်လိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုပြသထားတယ် "setting များကို။ "
စာရင်းရွေးချယ်မှုများပထမဦးဆုံးသင်လူတစ်ဦးကနေလူအပေါငျးတို့အများဆုံးသို့မဟုတ်မှသာအရေးကြီးသော updates များကိုမြင်ချင်သည်ဖြစ်စေသတ်မှတ်။ ယခင်ကဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, အဲဒီသငျသညျသူတို့ထံမှရလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးသတင်းများ၏အသံအတိုးအကျယ်ထားကြ၏။
ဤသည် menu ကိုသင်တို့ကိုလည်းအမျိုးအစားအလိုက်မွမ်းမံမှုများနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများတိကျတဲ့အမျိုးအစားများကိုပြသသည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ကို, သင်ရိုးရှင်းစွာစာရင်းပေါ်မှာစစ်ဆေးနေအသုံးပြုပုံအကြောင်းအရာဤအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီကိုစာရင်းသွင်းရန်သို့မဟုတ်နှုတ်ထွက်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအမျိုးအစားများပါဝင်သည်:
Facebook ကသတင်း feeds တွေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းအပေါ်တစ်ဦးအကူအညီစာမျက်နှာကိုထိန်းသိမ်းထားနှင့်မိတ်ဆွေများကိုဖုံးကွယ်နှင့် unhide ဖို့ဘယ်လိုရှင်းပြထားသည်။
ပိုလွယ် Unfriending သလဲ?
သင်က Facebook ပေါ်မှာသူတို့ကိုပုန်းအောင်းထက် unfriend တစ်စုံတစ်ဦးကမှအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူမယ့်စဉ်းစားနိုင်ပါသည်။ နည်းပညာအကဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကျော်အငြင်းအခုန်တွေအများကြီးရှိပါတယ် Facebook ကိုစွဲလမ်း ပြီး၏တန်ဖိုး Facebook ကိုခင်မင်မှု - အဲဒါကိုသူအပေါငျးတို့အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တောင်ထိုက်တန်ရဲ့ရှိမရှိ။
သို့သော် Facebook မိတ်ဆွေများအကျိုးခံစားခွင့်အများကြီးအဖြစ်, အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်။
သင်ရုံထက်ပိုပေါ် မူတည်. သူတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်ရန်သင်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါပေမယ့်ချိန်ခွင်လျှာအပေါ်, သင်၏အများအပြားအသိအကျွမ်းအဖြစ် Facebook ပေါ်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေများချိတ်ဆက်ထားပြီးတည်းခို၌ဘေးမရှိဖြစ်သင့်သည်။
Facebook မှာ Chat ကိုအပေါ်အသုံးပြုသူများ Block လုပ်နည်း
အဆိုပါ Facebook အဖုံးဓာတ်ပုံကိုပြောင်းလဲနည်း
Facebook မှာ Messenger ကိုအသုံးပြုခြင်းတစ်ခု Uber သို့မဟုတ် Lyft မိုးသီးလုပ်နည်း
သင်ဟာ Facebook ပေါ်မှာ Play နိုင်သလားဘုတ်အဖွဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲ
Facebook အခေါ် ဆို. လမ်းညွှန်
Facebook ကိုစွဲလမ်း7လက္ခဏာများ
Facebook အဘို့အ Animated GIF များရန်လမ်းညွှန်
ဆယ်ကျော်သက်အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း - လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုပါ
ဂိမ်းများနှင့်ပိုမိုအဘို့အပို Space ကိုဖန်တီးပါရန် PS3 Hard Drive Upgrade
အနီရောင်အဖွဲ့ခွဲ: ပြောက်ကျား Cheats - PS3
2Wire ပံ့ပိုးမှု (ယာဉ်မောင်း, လက်စွဲ, ဖုန်း, နှင့်နောက်ထပ်)
Apple က iCloud နှင့်အတူမျှဝေပါနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်ဗီဒီယိုလုပ်နည်း
ReadNotify - လက်မှတ်ရတဲ့အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှု
ထိုက်သည်အတိုင်းအပြစ်ပေး cheat - Arrow ကုဒ်များ
SQL query အတွက်ကိုက်ညီမှုရှိသည့်ပုံစံကို
GIMP အတွက် Layer Mask ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
အလိုအလြောကျ, Mac OS X ကိုမေးလ်အမှိုက်ပုံးထဲကနေဟောငျးမေးလ် Remove
ထှနျး 2015 သည်ကို Samsung, Sony နဲ့ Vizio 4K Ultra HD TV ကို
သင့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကို Facebook လွှတ်တင်ခြင်းအီးမေးလ်လိပ်စာရှာပါဖို့ကိုဘယ်လို
IOS အတွက် Chrome အတွက်ပုံမှန်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုပြောင်းလဲနည်း
ဒီ Patch နှင့်အတူကိုယ်လုံးတီး Sims Make
အဘယ်သို့ငါ PowerPoint အတွက် Bullet မရှိရင်တစ်ဦးက New လိုင်း Create သလား?
Lyft, Plus အား၎င်း၏အကောင်းအဆိုး cons ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
Facebook မှာ Messenger ကို Windows အတွက် Download
တစ်ဦး MQ4 ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
Samsung က NX500 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း